Warranty Period:6 mwedzi
HEECHI TECH ine chinangwa chekubatsira vanoputa yechinyakare kuti vawane hutano hwekuputa.Midziyo yekupisa-kusapisa yakabatsira vasvuti vakawanda kurega kusvuta nokudaro, zvichiita kuti zvive zvinotsiva zvinobudirira zvekusvuta.Zvinhu zvakadaro zvinotarisirwa kukurumidza kutorwa kwemidziyo yekupisa-kwete-kupisa pakati pevanhu.
HEECHI kupisa miti yemiti inoshandiswa yakasarudzika yemakwenzi, kuburikidza nezvinonhuhwirira zvechinyakare, uye inosanganisa kunhuhwirira kwefodya, izvo zvinogadzira yakasarudzika ruzivo rwekuputa.
PURE HeeChi Menthol, kukwidziridzwa kwenguva dzose menthol heatstick.Nechisikigo chemint essence uye yakaunganidzwa mashizha etii, inopa tii-based undertone uye inochengeta glacier ichidzvova mupfungwa.Kunzwa kunozorodza kusingadaviriki, kungotadza kumira.
Kunhuhwirira kwakamanikidzwa mukuputika bhinzi neinocheka tekinoroji, kwehupenyu hurefu hwechitoro uye kuwedzera kwakasimba.Nekurumwa kuri nyore, unogona kunakidzwa neiyo menthol yakakwidziridzwa chero nguva chero kupi
Iko kusimukira kutorwa kwefodya ye-e-fodya inotarisirwa kudzora kutorwa kwemidziyo yekupisa-kwete-kupisa, nekudaro, zvichikanganisa kukura kwemusika.E-fodya haina fodya uye inotendwa kuti ine huturu hwezvinhu zvine muchetura pane zvinogadzirwa zvefodya.
Mabhenefiti akadai anotarisirwa kuwedzera kutorwa kwefodya uye anogona kumisa kukura kwekupisa kwete kupisa musika.Zvakare, iyo mirau yakaomesesa yakatemerwa nevakuru venzvimbo munyika dzese dzakaita seAustralia, US, uye Germany yakadzora kukura kwemusika.Iko kusimukira kwekutengesa kwepamhepo uye kukwidziridzwa kwevagadziri vanotarisirwa kutyaira kupisa kwete kupisa musika wemidziyo mumakore anotevera.
Zvakapfuura: HEECHI Strawberry Non-Nicotine HNB Herbal Stick
Zvinotevera: HEECHI Strawberry Nicotine HNB Herbal Stick
Zita reChigadzirwa: HEECHI Mint Blast Nicotine HNB Herbal Stick